Fitantanana: maivana loatra ny tetibola ho an’ny fahasalamana | NewsMada
Fitantanana: maivana loatra ny tetibola ho an’ny fahasalamana
Salanisa, 2,5 % amin’ny fidiran-ketra ny mankany amin’ny fahasalamana eto Madagasikara, araka ny tatitra navoakan’ny Cour des comptes. Nisy fotoana izany, ny 2010 sy ny 2015, tafidina 1,32 % ny avy amin’ny fanjakana ho an’ny fahasalamana. Tsy zava-baovao fa nandritra taona maro ary nolanin’ny solombavambahoaka hatrany nandritra ny fitondrana nifandimby. 30 % ihany avy amin’ny fanjakana, ny 70 % kosa, fanampiana avy any ivelany. Mibaribary izany fanampiana avy any ivelany izany amin’izao Coronavirus izao.
Araka ny tarehimarika nomen’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS), 3 % monja amin’ny harinkarena faobe ny lany amin’ny fahasalamana eto Madagasikara, raha 8,8 % ny salanisa takin’ny OMS. Lany amin’ny fampandehanan-draharaha, toy ny karaman’ny mpiasa, ny tetibolan’ny minisiteran’ny Fahasalamana, izay tsy misy afa-tsy 7 % amin’ny tetibolam-panjakana (2019). Ampahany be indrindra amin’ny fampitaovana raha misy, avy amin’ireo mpamatsy vola avy any ivelany.
Olana goavana ny famatsiam-bola
Misy ihany ny fiarahana mandrotsaka latsakemboka avy amin’ny sehatra tsy miankina, saingy voafetra, tsy misy afa-tsy 1 % amin’ny mponina ihany no zakany, toy ny fizahana marary sy ny fanomezana fanafody ataon’ny Ostie. Avy amin’ny mpamatsy vola na iraisan’ireo orinasa mandoa latsakemboka 10 hatramin’ny 40 %.
Mbola olana goavana eto an-toerana ny famatsiam-bola ho an’ny fahasalamana, tsy ahafahan’ny maro anisa mahazo fitsaboana ara-dalàna, manomboka any amin’ny ankizy hatramin’ny lehibe. Misy fiantraikany betsaka izany any amin’ny toekarena. Singa iray lehibe anefa ny fahasalamam-bahoaka raha nofaritan’ny fanjakana ny fampandrosoana maharitra.